Borda amin'ny solosaina → peta-kofehy vita amin'ny solosaina / peta-kofehy fitafiana P&M
Ny fanaovana amboradara amin'ny solosaina dia iray amin'ireo fomba azo fantarina indrindra amin'ny fanamarihana ny akanjo sy ny lamba. Izany dia vokatry ny tantarany nanomboka an-jatony taona maro, izay tamin'ny andro fahagola ny vehivavy dia nanisy peta-kofehy tamin'ny lamba tamin'ny tànany.
Amin'izao fotoana izao, ny peta-kofehy dia ampiharina mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny milina fehezin'ny solosaina mifototra amin'ny programa fanaovana amboradara, izay noforonina tsirairay ho an'ny endrika sary tsirairay.
Volavola kely kokoa amin'ny lamba misy lanjany lehibe kokoa noho ny an'ny T-shirt nentim-paharazana no mety indrindra. Ny akanjo manokana dia manana tombony maro. Ny vokatra toy izany dia miavaka amin'ny fifaninanana, manamafy ny endrik'ilay orinasa ary manangana fahatsapana fiaraha-monina eo amin'ny ekipa raha ny fitafiana.
Ny amboradara amin'ny solosaina dia atao amin'ny akanjo sy lamba
Ny amboradara amin'ny solosaina dia azo ampiasaina amin'ny fahasaharana amin'ny famokarana gadget ho an'ny lamba akanjo fanaovana dokam-barotra. Logam-baravarana sy anaran'ny orinasa amin'ny polówkach, kitapo na towels mety ho fanomezana tsara ho an'ny mpanjifa na mpiara-miasa. Amin'ny fampiasana fitafiana na vokatra dokam-barotra toy izany dia hampiroborobo ny marika izy ireo.
Ho fanampin'ny akanjo, ny peta-kofehy dia matetika vita amin'ny vokatra toy ny kitapo, satroka, lamba famaohana ary fandroana. Ny logo misy peta-kofehy dia azo antoka fa matanjaka kokoa ary mahatohitra fitrandrahana kokoa noho ny fomba hafa fanamarihana amin'ny sary tsorakazo.
Ny fomban'ny peta-kofehy amin'ny solosaina
Fampidirana am-ponja dia fomba fanaingoana fantatra amin'ny fahagola, raha ny vehivavy dia amboradara amin'ny akanjo, lamban-databatra ary saina amin'ny tanany. Ny fahamendrehana sy ny faharetan'ny amboradara dia nahatonga azy ireo ho lasa kolontsaina maro, ary koa mariky ny faritra sasany amin'ny endrika fitafiana sy sora-baventy.
Ny kalitao avo lenta sy faharetan'ny marika fanaovana amboradara ihany koa dia nahitana fampiharana amin'ny doka maoderina. Ireo mpiasa manao akanjo miaraka amin'ny sary famantarana ny orinasa dia matetika no heverina ho toy ny solontenan'ny orinasa mendri-pitokisana fa tsy mitonona anarana. Ary koa ny lamba lamba fandraisam-bahiny amin'ny endrika lamba famaohana na akanjo fandroana misy fango dia mampitombo ny lazan'ny trano fandraisam-bahiny.
Ny mpampiandry sy ny restaurateurs miaraka amina lamba manokana gastronomic toy ny aprons na aprons dia heverina ho mifanaraka amin'ny marika ihany koa, ary noho izany dia mitaona fahatokisana bebe kokoa, izay matetika adika amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana ny mpanjifa. Ny amboradara koa dia gadget fanaovana dokambarotra izay ekena tsara.
Gadget voaravaka miendrika kitapo, satroka, T-shirt dia matetika ampiasaina amin'ny fifaninanana karakarain'ny orinasa ao anatin'ny fampiroboroboana na ho an'ny freebies ho an'ny mpanjifa.
Masinina fanaovana zaridaina amin'ny solosaina
Ny teknolojia maoderina sy ny fahafaha-manao ankehitriny dia mamela antsika hihaona amin'ny filan'ny tsena mihabe ny vokatra misy amboradara. Misaotra ireo milina maoderina, ankehitriny dia azo atao ny manao amboradara an'arivony ao anatin'ny fotoana fohy ary mitazona ny maha-marina ny endriny. Ity fivoarana ara-toekarena ity dia azo adika amin'ny vidiny mahaliana ho an'ny amboradara ihany koa.
Borda amin'ny solosaina - teknolojia azontsika ampiasaina
Ny masinina maoderina dia misy fanjaitra marobe ahafahana manisy loko ny kofehy mifanaraka amin'ilay tetikasa. Ny fizotry ny peta-kofehy dia tantanan'ny programa solosaina izay ampidirina ny endrika. Eo anilanay izy io mba hamaritana ny toerana mety hampiharana ny amboradara sy ny habeny. Ny peta-kofehy dia atolotra ho an'ny tetikasa kely kokoa, noho izany ny lazany amin'ny fanontana logo, anaran'ny orinasa, andrim-panjakana ary sekoly.
Tombony sy fatiantoka ny amboradara amin'ny solosaina
Ny fisehoan'ny akanjo misy marika dia zavatra mampiavaka azy. Ny peta-kofehy natao mazava tsara dia manome kalitao sy kanto vaovao ny lamba, ary ny marika amboariny dia mahazo laza. Tsy ilaina ny manahy fa ny sary na ny lahatsoratra dia hikororosy lamba manasa lamba na aorian'ny fampiasana maharitra.
Ny amboradara amin'ny solosaina dia ampahany amin'ny akanjo, izay manome tombony lehibe azy mihoatra ny fomba hafa izay mamontsina na mamorona lavaka amin'ny fikosehana tsikelikely. Ny amboradara amin'ny solosaina dia mety misy loko rehetra. Ny fetra tokana dia ny lokon'ny kofehy ampiasaina.
Ny peta-kofehy dia atao amin'ny alàlan'ny fandidiana mazava tsara noho ny fanaraha-maso ny solosaina. Ny teknika sy ny marimarina amin'ny amboradara amin'ny solosaina dia ahafahana mamaha ny lamina amboradara. Ny peta-kofehy dia mandoa vola be fotsiny.
Tombony fanampiny dia ny vidin'ny indray mandeha amin'ny fanomanana programa fanaovana amboradara, izay mijanona ao anaty tahiry ho an'ny tsara. Noho izany, amin'ny ho avy, raha miverina manafatra akanjo indray ny mpanjifa miaraka amina endrika mitovy aminy dia tsy ho afa-mivoaka amin'ny saram-pandraharahana izy.
Ny embroidery amin'ny solosaina dia manana fatiantoka ihany koa, saingy azo sorohina amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fomba fanamarihana mety amin'ny karazana fitaovana sy ny endriny. Izany no antony nanolorana hevitra anao hifandray amin'ireo matihanina alohan'ny hanomezana marika ny marika voalohany mba hisorohana ireo lesoka mety hitranga.
Mifanohitra amin'ny fanontana solosaina feno, ny amboradara dia tsy azo ampiasaina manjaitra sary feno misy loko tsy voafetra.
Na izany aza tsy izany no izy. Ny amboradara dia firesahana amin'ny lovantsofina satria mitovy amin'ny palitao miravaka akanjo mendri-kaja. Tsy misy ifandraisany amin'ny sary hosodoko vita amin'ny kitsy, azo hosasana.
Ny peta-kofehy dia tsy tokony hatao amin'ny amboradara amin'ny akora misy fehezan-teny ambany tsy mihoatra ny 190 g / m2. Ny peta-kofehy lehibe dia hanome ny fiheverana ny "ampinga", tsy ho miovaova mandritra ny fampiasana azy, ary rehefa ampiharina amin'ny fitaovana manify - ny fanjaitra dia afaka manindrona fitaovana manify toy izany.
Ohatrinona ny vidin'ny amboradara amin'ny solosaina?
Ny fanaovana amboradara amin'ny solosaina dia somary kely ihany ara-toekarena. Na izany aza, singa maromaro no mandray anjara amin'ny fanombanana marina. Isam-batan'olona, ​​ny peta-kofehy dia mora kokoa rehefa manafatra vokatra bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny haben'ny amboradara sy ny fahasarotan'ireo sary dia misy fiatraikany lehibe amin'ny vidiny, izay adika amin'ny fanombanana ny hakitroky ny amboradara. Arakaraka ny haben'ny peta-kofehy, arakaraka ny mivalona, ​​atambatra ary ny haben'ny habe, no vao mainka matevina ny amboradara. Ary koa ny isan'ny toerana hametrahana ny amboradara (ohatra ny logo eo aloha eo amin'ny tratra havia + logo eo afovoan'ny lamosina) dia zava-dehibe amin'ny vidin'ny singa. Matetika ny vidiny dia tsy misy fiantraikany amin'ny isan'ny loko ampiasaina, satria ny milina fanjairana dia misy kofehy maro. Ny vidin'ny fanomanana dia tokony ampidirina amin'ny filaharana amboradara voalohany programa fanaovana amboradaraizay efa ao anaty data-ntsika ary tsy ampiana amin'ny baiko manaraka.
amboradain'ny solosainaamboradara amin'ny akanjoT-shirt misy amboradaraT-shirt misy logoakanjo misy sary famantaranafitafiana misy soratraPolomanisy marika ny peta-kofehy amin'ny T-shirtakanjo manamarika akanjo misy sary famantarana